घर दक्षिण अमेरिका फुटबल स्टोरीहरू अर्जेन्टिना फुटबल खेलाडीहरू पापु गोमेज बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
LB ले एक फुटबल जीनियस उपनामको कहानी प्रस्तुत गर्दछ "एल पाचु“। यो पापु गोमेज बाल्यकाल कहानी, जीवनी, पारिवारिक तथ्य, अभिभावक, प्रारम्भिक जीवन, र अन्य लोकप्रिय घटनाहरूको पूर्ण सुरु कभरेज हो जुन उनको सुरुको दिनदेखि लिएर उहाँ लोकप्रिय हुनुभयो।
पापु गोमेजको जीवन र उदय। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
हो, सबैलाई थाँहा छ कि ऊ पिच टेक्निकल टेस्टेड र डाइनेमिकमा एक महान नेता हो। जहाँसम्म, केवल केहि थोरैले पापु गोमेजको जीवनीको हाम्रो संस्करणलाई विचार गर्छन् जुन धेरै रोचक छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
पापु गोमेज बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - पारिवारिक पृष्ठभूमि र प्रारम्भिक जीवन
सुरू गरेर, पापु गोमेजका अभिभावकहरू उसलाई मा थिए फेब्रुअरी १ ​​th day day १ 15 र उसलाई नाम दिए अलेजेन्ड्रो डारो गोमेज. नाम "पापु गोमेज”केवल एक उपनाम हो। प्रतिभाशाली फुटबलर अर्जेन्टिनाको ब्यूनस आयर्स शहरमा जन्मिएको थियो जसका बाबुआमालाई यो बायो लेख्ने क्रममा थोरै मात्र थाहा छ। तल पापु गोमेजका आमा बुबाको फोटो छ- उसको जस्तो बुबा र राम्री आमा।
पापु गोमेज अभिभावकलाई भेट्नुहोस्। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
गोमेज इटालियन-अर्जेन्टिनीको दक्षिण अमेरिकी परिवारको उत्पत्तिको साथ मिश्रित जातीय राष्ट्र हो। उनको जन्म शहर - ब्यूनस मेष - Avelaneda मा हुर्किएको थियो जहाँ उहाँ आफ्नो बहिनी मोनिका संग हुर्केका थिए। ब्युनस मेषको एवेलेन्डामा मध्यमवर्गीय पारिवारिक पृष्ठभूमिमा हुर्केकी, जवान गोमेज व्यावहारिक रूपमा बाँचे र आफ्नो प्रारम्भिक वर्षहरूमा फुटबलको सास फेरे। जवान गोमेजको पारिवारिक घर स्थानीय क्लब इन्डिपेन्डिन्टे र रेसि Racingको स्टेडियमदेखि टाढा थिएन। वास्तवमा, उहाँसँग साइकलमा आराम गर्न त्यहाँ पुग्ने पर्याप्त थियो।
ब्यूनस मेषको Avellaneda मा हुर्किएको: पापु गोमेजको बचपनको फोटो। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
बढी के? गोमेज काका स्वतन्त्र स्वतन्त्र टोलीका सदस्य थिए जसले १ 1984। XNUMX मा इन्टरकन्टिनेन्टल जितेका थिए जबकि उनका बुबाले क्लबमा काम गरे। युवा गोमेजका लागि फुटबल हावामा थियो भन्ने तथ्यलाई इन्कार गर्न त्यहाँ कुनै कुरा छैन।
पापु गोमेज बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
धेरैजसो अर्जेन्टिनाहरू भन्दा विशेष गरी उसको उमेरका बच्चाहरू, गेमेज प्रशंसाको गीत गाउँदै हुर्किएनन् डिएगो मराडोना। उनका मूर्तिहरू अर्जेन्टिना महापुरुषहरू थिए - पाब्लो ऐमर, जुआन रोमन रिकेलमे र सेबास्टियन भेरेन।
थप रूपमा, गोमेजले स्थानीय क्लबहरूमा धेरै लगानी गरेको थियो, उनी इन्डिपेन्डिन्टेका धेरै प्रशंसक थिए (जहाँ उनीसँग धेरै मूर्तिहरू पनि थिए) र उनले आफ्नो क्यारियर निर्माणको प्राय जसो स्थानीय क्लब पढाइमा गरेका थिए।
पापु गोमेजको एक दुर्लभ तस्बिर पिचको छेउमा बसिरहेको जहाँ प्रतिस्पर्धी फुटबलमा उसले आफ्नो करियरको अधिकतम निर्माण हाल्यो। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
पापु गोमेज बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
पढाइ जवान गोमेजको बाल्यकाल क्लब थियो, जहाँ उनले प्रतिस्पर्धी फुटबल, सीख्ने र सिद्ध कौशलको सेटमा आफ्नो प्रारम्भिक कदमहरू लिए जुन उनलाई थाहा थिएन कि उसलाई केही वर्षमा दक्षिण अमेरिकी महादेशको पार गर्थे। गोमेज १ 14 बर्षको उमेरमा ऊ आर्सेनल डे सारण्डेमा सामेल भए र अर्जेन्टिना क्लबको समूहमा उत्रिए र २०० youth मा युवा टीमको पहिलो टोलीमा प्रवेश गर्नु अघि २०० 2005 कोपा टन्डिलको उपाधि जित्न युवा समूहलाई सहयोग पुर्‍यायो।
बायाँ चित्रित, उनले आर्सेनललाई २०० Cop कोपा टन्डिलको उपाधि जित्न मद्दत गरे। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
गोमेजले २०० at को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन गर्ने वर्षको साथ क्लबमा years बर्ष बिताए जब उनले गोल योगदान गरे जसले आफ्नो पक्षलाई क्लब अमेरिकाको बिरुद्ध गोलको नियममा कोपा सुदामेरिकाना फाइनल जित्न मद्दत गरे। त्यसपश्चात फुटबल प्रयासहरूले गोमेजले अर्जेन्टिना क्लब सान लोरेन्जो डे अल्माग्रोमा एक वर्षको प्रभावशाली खेल देखे जुन विकासको कारण इटालियन पक्ष - क्याटानियाले आफ्नो सेवाहरू सुरक्षित गर्‍यो।
पापु गोमेज बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सडकमा फेम स्टोरी
क्याटानियामा हुँदा गोमेजको फारमले एथलेटिको म्याड्रिड, फियोरेन्टीना र इन्टर मिलान सहित शीर्ष उडान क्लबहरूबाट चासो जगायो। यद्यपि उनले युक्रेनी प्रिमियर लिगको थोरै ज्ञात मेटलिस्ट खार्भिवको लागि खेल्ने छनौट गरे। गोमेजको असामान्य चालको कारण यो छ कि उहाँ युक्रेनियन पक्षमा सुधार गर्ने र आगामी चैम्पियन्स लिगमा क्लबको सहभागिताको अभिन्न अंग हुने अवसर पाउने कुरामा विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो भन्ने तथ्यको सीमा थियो।
दुःखको कुरा, मेटलिष्ट खार्किभमा अगाडि बढ्ने अपेक्षाहरू पूरा भएनन्। सुरु गर्न, युईएफएले २००ist को खेल फिक्सिंगमा क्लबको संलग्नतालाई एक मजबूत कारणको रूपमा लिगमा मेटिलीस्टको प्रतिबन्धलाई समर्थन गर्‍यो। कुरालाई अझ नराम्रो बनाउनको लागि गोमेज दुःखी थिए कि क्लबमा भाषाको अवरोधसँग मिल्दो गुणवत्ता र दृश्यता थिएन जसले उसलाई हराएको महसुस गरायो। आधा तलब स्वीकारेर उसले आफ्नो करारबाट अप्ट आउट गर्ने आफ्नो ईच्छा घोषणा गरेको धेरै समय भयो तर अनुरोधलाई अनुमति दिइएन।
मेटलिस्टमा, गरीब पपुले प्रशिक्षणलगायत सबैसँग संघर्ष गरे। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
पापु गोमेज बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - फेम स्टोरीमा उठाउनुहोस्
गोमेजले अर्को मौसममा मेटलिस्टमा फर्कन अस्वीकार गरे जसले हिंसात्मक र अस्थिर वातावरण जसले युक्रेनलाई समाहित गर्‍यो, न त अधिकांश विदेशी खेलाडीहरू यही कारणले फर्केका थिए। यो धेरै समय भएको थिएन जब गोमेज इटालीको गर्मी ट्रान्सफर विन्डोको अन्तिम घण्टामा इटालियन साइड एटलान्टा द्वारा अधिग्रहण गरिएको थियो।
स्वतन्त्रता अन्तिम: पापु गोमेजको खुशीको कुनै सीमा थिएन जब अटलान्टाले उनलाई मेटलिस्टबाट प्राप्त गर्‍यो। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
अगाडि अटलान्टा संग एक प्रभावशाली सभ्य डेब्यू २०१ 2014/२०१2025 सत्र थियो र आफूलाई अग्रणी गोल स्कोरर र प्राय जसो सहायकको प्रदायकको रूपमा स्थापित गर्न गयो। उनले अटलान्टालाई २०१–-१– सेरी ए सीजनमा ऐतिहासिक तेस्रो स्थानमा पुग्न पनि कप्तान बनाए, यस्तो स्थिति जसले उनीहरूलाई २०१––२० युईएफए च्याम्पियन लिग, साथै २०१ Cop कोपा इटालिया फाइनलमा पनि स्थान दियो। बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
पापु गोमेज बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सम्बन्धी जीवन तथ्यहरू
पापु गोमेज जीवनलाई प्रेम गर्ने जीवनमा, उनले सम्मानित रूपमा उसकी प्रेमिका बनेकी श्रीमती लिन्डासँग विवाह गरेका छन् र विवाहपूर्व वा विवाह विवादास्पद विवादमा मुछिएका छैनन्। न त पापु गोमेजको गर्लफ्रेंडको लिंडा भेट भन्दा पहिले नै रेकर्डहरू छन्।
लिन्डा र गोमेज एक रमाइलो वैवाहिक सम्बन्ध मा छन्। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
लिन्डा पापु गोमेजकी पत्नी मात्र होइन तर उनको प्रशंसकको साथसाथै क्यारियर महिला जसले आर्किटेक्टको रूपमा काम गर्छिन्। दम्पतीहरूले विवाहको क्रममा तीन बच्चाहरूको साथ लेखेका छन् जब उनीहरूले बाउटिस्टा (छोरा) कन्स्टान्टिना (छोरी) र मिलो समावेश गर्दछन्।
पापु गोमेज परिवारको एक प्यारा फोटो- उनकी श्रीमती र बच्चाहरू। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
पापु गोमेज बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - पारिवारिक जीवन तथ्य
निस्सन्देह परिवारले उसको क्यारियर र प्रेम जीवनलाई अझ प्रख्यात बनाउँछ। यस खण्डमा, हामी तपाईलाई पापु गोमेज परिवारका सदस्यहरुको बारेमा उसका आमाबुवासँग शुरू हुने बारे थप तथ्यहरु ल्याउँदछौं।
पापु गोमेज बुबा र आमाको बारेमा: गोमेजका अभिभावकको साथ सुरू गर्न उसले आफ्नो बुबा र आमाको बारेमा धेरै कुरा प्रकट गर्दैन। सहयोगी आमाबाबुको बारेमा थोरै मात्र हामीलाई थाहा छ एक अन्तर्वार्ताबाट आउँछ जसमा गोमेजले छोटो कुराकानी गरे कि उनका बुबा स्थानीय क्लब स्वतन्त्रियन्टेनमा काम गर्छन्। उनले यो पनि स्वीकार गरे कि उनकी आमा आफ्नो प्रारम्भिक जीवनदेखि आजसम्मको सबैभन्दा महत्वपूर्ण महिलाहरू मध्ये एक भएको छ।
पापु गोमेजको औपचारिक फोटो आफ्ना सदा सहयोगी अभिभावकहरूको साथ। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
पापु गोमेज भाई बहिनीहरू र आफन्तहरूका बारे: पापु गोमेजको एक बहिनी मोनिका भनेर चिनिन गईरहेकी छिन् जबकि यो निश्चित छैन कि उनीसँग मोनिकाका भाई र बहिनीहरू छन् कि छैन। पापु गोमेजको पारिवारिक जरा र पुर्खाहरू विशेष गरी उनका बुवा हजुरबा हजुरआमाहरू र हजुरआमा र हजुरआमाको कुनै रेकर्ड छैन। गोमेजका एक जना काकालाई ह्युगोको रूपमा पहिचान गरिएको छ जबकि उनका बुआ, काका, भतिजा र भतिजीहरू अज्ञात छन्।
पापु गोमेजको उनकी बहिनी मोनिकासँग एक दुर्लभ फोटो। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
पापु गोमेज बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - व्यक्तिगत जीवन तथ्य
के तपाईंलाई थाहा छ पापु गोमेज अदालतमा राम्रो फार्मका लागि समाचारमा हुनु आवश्यक पर्दैन? उनको अफ पिच व्यक्तित्व - जुन कुम्भ राशि राशि चिन्ह द्वारा धेरै परिभाषित गरिएको छ - निरन्तर उनलाई सुर्खेतमा राख्छ।
उहाँ शान्त, अनुपम, कार्य-केन्द्रित, ईमानदार हुनुहुन्छ र आफ्नो निजी र व्यक्तिगत जीवनको बारेमा तथ्यहरू विरलै प्रकट गर्नुहुन्छ। गोमेजको रुचि र शौकमा चलचित्रहरू हेर्न, पौंडी खेल्न, भिडियो गेमहरू खेल्न, टेनिस खेल्न, खाना पकाउन र आफ्नो परिवार र साथीहरूसँग गुणस्तरीय समय बिताउनु समावेश छ।
फुटबलरलाई यो भन्न आवश्यक छैन कि ऊ खाना पकाउनमा ठूलो छ। भाँडाकुँडाहरू उसको लागि बोल्छन्। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
पापु गोमेज बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - जीवन शैली तथ्य
पापु गोमेजले कसरी पैसा कमाउँछन् र बोल्छन् भन्ने कुरा गर्नुहोस् जुन स्ट्राइकरको बढ्दो नेट वर्थको अनुमानित रकम ज्याला र तलबले खुवाइन्छ जुन उसले उडान उडान गर्ने फुटबल खेल्नको लागि प्राप्त गरेको छ जबकि उसको खर्च बानीहरूको विश्लेषणले उनी विलासी जीवनशैली बिताएको कुरा प्रकट गर्दछ।
यस्तो जीवनशैलीको प्रमाणमा विलासितापूर्ण बिदा साइटहरूमा यात्राको लागि निजी जेटहरूमा चढ्ने क्षमता पनि समावेश छ। थप रूपमा, स्ट्राइकरसँग महँगो कारहरू छन् उसको घर र अपार्टमेंटको सुन्दर ग्यारेजमा।
राम्रो जीवनको प्रमाण: यहाँ पापु आफ्नो सुन्दर कारको अर्को पोज गर्दै छन्। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
पापु गोमेज बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - अनियमित तथ्यहरू
हाम्रो पापु गोमेज बाल्यकाल कहानी र जीवनी समेट्न, हामी फुटबल प्रतिभाको बारेमा थोरै वा अनटल्ड तथ्यहरू प्रस्तुत गर्दछौं।
धुम्रपान र मदिरा: यद्यपि गोमेजलाई धूम्रपान गरिएन तर उनी मदिरा सेवन गर्न ठूला छन् र एक पटक आफ्नी पत्नी लिन्डासँग बियरको बियरको आनन्द उठाउँदै भेटिए। जे होस्, यो निश्चित छ कि अगाडि उसले जिम्मेवारीपूर्वक पेय पदार्थ सेवन गर्दछ उसको स्वास्थ्यको रक्षा गर्न र सार्वजनिक उपहासको अवसरहरू रोक्न।
जिम्मेवारीका साथ पिउने: उनी र उनकी श्रीमतीलाई घोर बियरको मजा लिन मन पराउँछन्। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
धर्म: पापु गोमेजको आफ्नो धर्मको बारेमा स्पष्ट कुनै रेकर्ड छैन। यद्यपि, उनको छोरा बाउटिस्टा र छोरी कन्स्टान्टिनाको नाममा ईसाई हुँ भन्ने कुराको पक्षमा धेरै अनौठो छ। यसले पापु गोमेजका आमा बुबाले उनलाई एक इसाई हुर्काएको सम्भाव्य छ।
ट्याटूहरू: गोमेज अर्जेन्टिनीमा जन्मेका धेरै फुटबल प्रतिभाहरूमा पर्छन जो ट्याटूमा ठुलो हुन्छन्। अग्रेषित को पाखुरा, छाती, खुट्टा मा रंगीन शरीर कला छ वर्ष द्वारा अधिक कला थप्न को लागी।
पापु गोमेजको ट्याटूको अंशहरू देखाउँदै एउटा सुन्दर फोटो। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
उसको उपनाम बारेमा: के तपाईंलाई थाहा छ गोमेजको उपनाम "एल पापु" ले केहि उचाई feet फिट inches इन्चको साथ गर्नको लागि छ। उनको आमाले अगाडि नै दिएको हो भन्ने उपनाम "पापुची" बाट पक्राइन्छ जसको अर्थ हो "छोटो कद"।
Armbands: एक फुटबल प्रतिभाशाली पापु गोमेज आफ्नो शैली र मौलिकताको लागि प्रसिद्ध छ उनकी श्रीमतीलाई जसले उनको लागि सुन्दर कप्तान आर्म्बान्ड बनाउँदछन्। आर्मेन्ड्स या त फुटबल ग्रेटलाई श्रद्धांजलि दिन्छ वा फुटबलका साथै गोमेजको परिवारको जीवनमा विशेष अवसरहरूको स्मरण गर्दछ।
थोरै फुटबलरले लगाएको केही आर्म्बान्डहरूको संकलनहरू। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो पापु गोमेज बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्या reading्कहरू पढ्नका लागि धन्यबाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि थाहा पाउनुभयो जुन ठीक लाग्दैन भने, कृपया यसलाई हामीसँग साझेदारी गर्नुहोस् तल टिप्पणी गर्दै। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।